Apokalypsy 14 | Baiboly | Fandikan-tenin’ny Tontolo Vaovao
14 Ary hitako ny Zanak’ondry+ nitsangana teo amin’ny Tendrombohitra Ziona,+ ary nisy efatra arivo sy efatra alina sy iray hetsy+ niaraka taminy, nanana ny anaran’ny Zanak’ondry sy ny anaran’ny Rainy+ voasoratra teo amin’ny handrin’izy ireo. 2 Ary nahare feo avy any an-danitra aho, toy ny feon’ny rano be+ sy toy ny feon’ny kotroka mafy. Ny feo izay reko dia toy ny an’ny mpihira izay nampiaraka ny hirany tamin’ny harpa+ sady nitendry harpa. 3 Ary nihira+ toa hira vaovao+ teo anoloan’ny seza fiandrianana sy teo anatrehan’ny zavamananaina efatra+ sy ny anti-panahy+ izy ireo. Ary tsy nisy nahay izany hira izany, afa-tsy ny efatra arivo sy efatra alina sy iray hetsy,+ izay novidina+ avy teto an-tany. 4 Izy ireo no tsy nandoto tena tamin’ny vehivavy,+ fa virjiny+ izy raha ny marina. Izy ireo no nanaraka foana ny Zanak’ondry na taiza na taiza nalehany.+ Novidina+ avy teo amin’ny olombelona izy ireo ho voaloham-bokatra+ ho an’Andriamanitra sy ny Zanak’ondry, 5 ary tsy nisy lainga hita teo am-bavany+ sady tsy nisy tsiny+ ireo. 6 Ary hitako fa nisy anjely hafa iray nanidina teny afovoan’ny lanitra.+ Nanana vaovao tsara+ mandrakizay izy, dia vaovao mahafaly hotorina amin’ny mponin’ny tany sy amin’ny firenena sy foko sy olona samy hafa fiteny ary vahoaka rehetra.+ 7 Ary nanao tamin’ny feo mafy izy hoe: “Matahora an’Andriamanitra+ ka omeo voninahitra izy,+ satria tonga ny ora fitsarany.+ Koa mivavaha amin’Ilay nanao+ ny lanitra sy ny tany sy ny ranomasina ary ny loharano.”+ 8 Ary nisy anjely hafa faharoa avy eo, nanao hoe: “Nianjera, nianjera+ i Babylona+ Lehibe, ilay nampisotro ny firenena rehetra ny divain’ny+ fahatezeran’ny fijangajangany!”+ 9 Ary nisy anjely hafa fahatelo avy eo, niantsoantso mafy hoe: “Raha misy mivavaka amin’ny bibidia+ sy ny sariny+ ka mandray marika eo amin’ny handriny na eo amin’ny tanany,+ 10 dia hisotro koa ny divain’ny fahatezeran’Andriamanitra izay araraka tsy mitampoka ao anatin’ny kaopin’ny fahatezerany,+ sady hampijalina+ amin’ny afo sy ny solifara+ eo imason’ny anjely masina sy ny Zanak’ondry. 11 Ary hiakatra mandrakizay mandrakizay ny setroky ny fijalian’ireo+ mivavaka amin’ny bibidia sy ny sariny sy izay mandray ny mariky+ ny anarany, ary tsy hanam-pitsaharana ny fijalian’izy ireo na andro na alina. 12 Eto no mila fiaretana ny olona masina,+ dia ireo mitandrina ny didin’Andriamanitra+ sy mifikitra amin’ny finoana+ an’i Jesosy.” 13 Ary nahare feo avy any an-danitra aho nanao hoe: “Soraty izao: Sambatra izay maty+ ao amin’ny Tompo+ manomboka izao.+ Eny, hoy ny fanahy, aoka izy hitsahatra amin’ny asa mafy nataony, fa ny zavatra nataony manaraka azy.” 14 Ary nahita aho fa nisy rahona fotsy, ary nisy tahaka ny zanak’olona nipetraka teo ambonin’ilay rahona,+ nanana satroboninahitra volamena+ teo amin’ny lohany sy antsy fijinjana maranitra teny an-tanany. 15 Ary nisy anjely hafa nivoaka avy tao amin’ny toerana masin’ny tempoly, niantsoantso mafy tamin’ilay nipetraka teo ambonin’ny rahona, nanao hoe: “Arosoy ny antsy fijinjanao ka mijinjà,+ satria tonga ny ora fijinjana,+ fa masaka tanteraka ny vokatry+ ny tany.” 16 Ary ilay nipetraka teo ambonin’ny rahona dia nijinja ny tany tamin’ny antsy fijinjany, ka voajinja ny tany. 17 Nisy anjely hafa koa nivoaka avy tao amin’ny toerana masin’ny tempoly izay any an-danitra,+ ary nanana antsy fijinjana maranitra koa izy. 18 Mbola nisy anjely hafa koa nivoaka avy teo amin’ny alitara, ary nanana fahefana tamin’ny afo+ izy. Ary niantsoantso mafy tamin’ilay nanana antsy fijinjana maranitra izy, nanao hoe: “Arosoy ny antsy fijinjanao ka angony ny sampahom-boaloboky ny tany,+ satria efa masaka ny voalobony.” 19 Ary ilay anjely+ izay nijinja ny tany tamin’ny antsy fijinjany sy nanangona ny voaloboky+ ny tany, dia nanipy mafy izany tao amin’ny famiazam-boaloboka lehibe, dia ny fahatezeran’Andriamanitra.+ 20 Ary nohitsakitsahina tany ivelan’ny tanàna+ ny voaloboka tao anaty famiazana, ka nisy ra nivoaka avy tao. Ary tafakatra hatreo amin’ny lamboridin-tsoavaly+ ny ra sady tonga hatrany amin’ny eninjato sy arivo stadio.*+
^ 300 km eo ho eo.